Manerana an’i Afrika Andrefana amin’ity herinandro ity (jolay 2006) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2018 9:19 GMT
(Lahatsoratra efa tamin'ny volana Jolay taona 2006)
Atombokontsika amin'ny Under the Acacias izay mibilaogy ny: Osama bin Laden ao Burkina Faso ny fitsidihana bilaogy amin'ity herinandro ity
Nibanjina ahy avy eo amin'ny ramevany, miaraka amin'ny basy kalashnikov teny an-tanany ny tarehin'i Osama bin Laden .
Soa ihany, fa teo anoloan'ny t-shirt-n'ny ankizilahy kely iray izy, izay nijanona nihaino ahy raha niresaka tao an-tsenan'i Gorom-Gorom niaraka tamin'ny namana sasany aho. Tsy ao Burkina Faso ara-batana i Bin Laden, mazava ho azy – na dia teo aza ny tsaho teo an-toerana fa niafina tany Deou, tanàna-tsena lavitra ao avaratr'i Gorom-Gorom izy. Na dia izany aza, miely patrana ny t-shirt misy ny endriny – na dia tsy hita be toy ny tamin'ny taona 2002 aza. Fa inona no dikan'izany – tena manana mpanohana betsaka tokoa ve izy eto?
The Trials & Tribulations of a Freshly-Arrived Denizen…of Ghana kosa miahiahy momba ny fivarotana rongony an-tsokosoko ao Ghana sy ny faritra afrika andrefana: Satria efa hifarana ny herinandro any Accra: Hevitra momba ny Fikambanan'ny Polisim-paritra CEDEAO (FBI?), Sy ny ady amin'ny Fandrahonan'ny Zava-mahadomelina
Nisokatra tamin'ny zava-mahadomelina tao an-tsaiko ny herinandro: mpihira malaza, Daassebre, izay tratra nitondra kôkainina roa kilao tao Angletera. Niteraka fifanakalozan-dresaka tamin'ny radio tamin'ny Talata izany ka nahatonga ireo Ghaneana marobe te-hihantsy ny loza ateraky ny fitondrana zava-mahadomelina ao amin'ny tany Eoropeana.
Manontany ny bilaogy kameroney Scribbles from the Den : Fibilaogina eo amin'ny Afrikanina: Eo am-pelatanana tokoa ve ny Revolisiona?*
Afaka andro vitsy, hojerentsika ny fampiasan'ireo Afrikana any an-tanindrazana sy any am-pielezana ny aterineto (indrindra fa ny herin'ny bilaogy) mba hananganana vondrom-piarahamonina an-tserasera miezinezina, manome fanadihadiana hafa momba ny zava-mitranga any amin'ny kaontinanta, mihaika ireo fitondrana mpanao famoretana, ary maneho fomba fijery manokana momba ireo olana isan-karazany.
Eo amin'ny sehatra ara-politika any Kamerona, manambara i George Ngwane fa: Misy ny fahaverezan'ny finoana ao amin'ny rafitra antoko ao Kamerona
Nahoana no zava-dehibe ho an'ny mahaleotena ny mirotsaka hofidiana?
Ny fandraisana anjaran'ireo kandidà mahaleotena amin'ny fifidianana tsirairay dia midika zava-misy ara-politika amin'ny fahazoana indray ny fiandrianam-bahoaka sy ny maha-ara-dalàna ny demaokrasia avy amin'ny olom-pirenena rehetra. Ny fiforonan'ny antoko dia mifototra amin'ny fanirian'ny ampahan'ny vahoaka vonona an-karihary hamantatra tsirairay ny tombontsoam-bahoaka amin'ny alàlan'ny demaokrasiam-pifidianana ary avy eo ny demaokrasiam-pisoloantena. Saingy ambonin'ny zavatra rehetra, miorim-paka amin'ny tsirinkevitra safidy sy azo isafidianana ny demaokrasia. Ny firotsahana ho kandidà mahaleotena no iray amin'ireo azo isafidianana manitatra ny sehatra demaokratika, mifantoka amin'ny fahamendrehan'ny tsirairay, izay mijery ireo olana manokan'ny mpifidy ary manome fahafahana ho an'ny tovovavy sy tovolahy handray anjara mavitrika amin'ny politika.
Home of the mandinmories manadihady ny lahatsoratry ny gazety Gambiana momba ny fifindramonin'ny tanora Afrikana ho any Eoropa: Home sweet home (Mamy ny mody).
Mitaraina momba ireo zavatra tafahoatra raisin'ny tanora Afrikana mba hanao izany ho any amin'ny morontsirak'i Eoropa ao amin'ity matoandahatsoratra ity ny gazety The Point
Maro ny adihevitra tato ato momba ireo mpifindra monina Afrikana miezaka miditra ao Eoropa amin'ny alalan'ilay antsoina maro hoe “làlan'ny fiverenana”. Tahaka ny firenena Afrikana maro, namoy ny ankamaroan'ny olom-pireneny, indrindra ny tanora, tao amin'ny ranomasina mampidi-doza eo anelanelan'i Espaina sy i Maraoka i Gambia ary na dia teo aza ny alahelo voajanahary miverimberina amin'ny amin'ny fahafoizana aina, dia maro ireo mbola vonona hiatrika ny fepetra ratsy mba hidirana ao Eoropa izay nandrasan'ny tanora Afrikana nandritra ny taona maro ho toy ny ahitra maitso kokoa. Indrisy, tena mampalahelo, raha jerena ny vokatry ny anjoria miantraika amin'ny tanora Afikranina marobe tsy manana fanantenana!